I-Auto AMAZWI YENKONZO / UMNYANGO WE-Injini ye-Injini ye-Injini | Iinxalenye ze-1D ezizenzekelayo
Ioli ye-Injini yemoto
I-piston kunye neringi
Umgangatho ophezulu, inkonzo ephezulu
Sigxila kuphando& Phuhlisa imodeli yaseJapan yePiston,
I-piston ring, i-liner, i-gasket, i-gasket egcweleyo, ebhekisa yenjini,
Ioli ye-injini, iiplagi ze-sparks kunye neeplagi ze-glogs.
I-1D Auto Child Chinad eMzantsi China Guang Zhou City, yafunyanwa ngo-2010 ngamava angathunyelwanga ngaphandle kwamava enjini, inkampani inikezelwe kwi-piston, i-Inner, i-injini ye-Injini, ioyile yokukhanya njl.
Siyazingca ngokuba yi-piston ephezulu ye-chiston kunye ne-rissings enamavili edibene neToyota, iMitsubishi kunye ne-Isuzu oem.
I-1D yeNkampani igxile kwiNkampani eNciphisi apha ngezantsi:
1. Uphando olunamandla& Phuhlisa indlela yokusebenza: lungiselela iimodeli ezingaphezu kwe-1600 kunye neemveliso ezingama-32, umkhono wemveliso yemihla ngemihla ezingama-40,000 i-PCS Piston, 200,000 i-PCS Piston iringi yeFCS.
2. IKHAYA& Izatifikethi: oomatshini be-Bosch ekhokelwa yi-Bosch / i-NEAMECS, itekhnoloji ye-Japan kunye ne-170 abasebenza nge-170 abaqeqeshiweyo, i-CCIP COADS, i-SCCIP, i-ISO / 0-2015 evunyiweyo.
3. I-Cargo Medicietic ilungele& Isitofu esaneleyo sokugqibela: Yakha isiseko sokugcina iimpahla kwi-South China Guangzhou City ukuphendula ngokukhawuleza ulwazi lwentengiso kunye nemfuno yomthengi.
4. Imakethi yentengiso& Inkonzo yabaThengi: Vula ivenkile ethe ngqo kunye ne-ofisi yorhwebo, ufezekisa abathengi "ngoncedo lwalo lonke uncedo" lwasemva kwentengiso.
Iindawo ezi-1D ze-outo ngumvelisi wenxalenye ye-Auto agxile kwi-Injini ye-Injini yemoto.
Eyona nto iphambili kumgangatho obalaseleyo
I-1D yeyona nto iphambili kumzi-mveliso ophambili, indawo& Izatifikethi: Matshini we-Bosch yeHlabathi
Eyona mveliso ye-WAther
I-1D i-WHOMALELE THEMALELE IXESHA LOKUGQIBELA - 1D, i-1D, i-Japan NPR yeTekhnoloji kunye ne-170 ifanelekile iOfisi yeCCCICICES, i-CCIP, i-CCIP, i-ISO-2015 evunyiweyo.I-1D elona ftware ye-WAther olona ftware, i-Duargo Longetion Ase& isitokhwe esaneleyo
Umgangatho ophezulu we-Glow plug Outleale-Inxalenye ye-Outo Auto Co., Ltd.
I-1D esemgangathweni ephezulu ye-1D iPlag WhoG OPHANDE I-ORTESALEX-ARTP., I-LTD yeTekhnoloji ye-CRO.
Eyona mgangatho mhle ye-payiket
I-1D elona shishini ligcweleyo lomzi-mveliso, indawo& Izatifikethi: Matshini we-Bosch yeHlabathi
Eyona nto iphambili kumzi-mveliso wasePiston
I-1D ye-1D i-piston yomzi-mveliso we-piston, indawo& Izatifikethi: Matshini we-Bosch yeHlabathi
Best piston Factory Ixabiso - 1D
1D Best piston Factory Price - 1D, Isibonelelo& izatifikethi: kwihlabathi-phambili Bosch / Siemens oomatshini ifakwe
Inxalenye yenxalenye ye-Auto Auto Auto i-Injini ye-injini ngaphezulu kweminyaka eli-11.
Umthengisi opheleleyo we-starket
Umthengisi opheleleyo we-starket.Ukuvavanywa kwemveliso kuqhutywa rhoqo ukuqinisekisa umgangatho ophezulu.
Kuyanconyelwa kakhulu oko.
Abavelisi be-piston piston
1. IToyota, i-Honda, iSuzuki, i-DAFA kunye neenjini ze-nissan zepetroli zamkela iringi yentsimbi ye-Oxidation, i-chrome ye-chrome ye-oyile, i-rik ye-chrome ye-chrome, i-rik, emnyama Ngekhowudi yemibala (ibomvu, ityheli kwaye iblowu) kwaye ichwetheza t okanye n, iringi nganye itshizwa ngekhowudi yemibala (ibomvu, ibhulene)2. I-Mississishi, iNissan, i-Toyota, i-Toyota, i-Diesel Direct Pidation, umgca we-chrome ophezulu, i-chrome ye-Angle, i-Teper ye-Teper, i-chrome ye-Willing, i-chrome ye-Willing, i-chrome ye-Wit, i-Tale Ikhowudi nganye yokutshiza iringi (ibomvu, ityheli neblue)3. I-Isyuzu i-injini ye-Isuzu yayamkela inkqubo yoqobo, ukubekwa kwicala lesithathu okanye ukujikeleza kwecala, impatho yomphezulu we-oyile kunye ne-imeyile enkulu yeoyile ye-oyile, kunye nePolytetrafliookenene yentwasahlobo yentwasahlobo. Uhlobo lwe-T okanye N, iKhowudi yePray Spray Play (ibomvu, ityheli kunye neblowu)
Abavelisi be-Spag ye-Spark
Abavelisi be-spag ye-spag.Ukuphucula inkonzo yokuqhuba ukuphuculwa komfanekiso weBraw.
Umgangatho ophezulu weNtlet-ntle ye-Geadket ye-Whesterket Overleseelieliber-I-1D IIKHODI ZE-1D
Indima ye-gasket igibisela, yindawo yokutywina ye-elastic phakathi kwebhloko ye-cylinder kunye nentloko ye-cylinder, esetyenziselwa ukuthintela igesi ephezulu, ioyile epholileyo kwaye ikhuphe njalo.I-1D yenxalenye ye-Auto., Ltd. I-Geept ekumgangatho we-Galket ye-headket ye-Ontertest-I-1D AUTOR COO., Ltd.
Intro yokusetyenziswa kwe-panty lirs 1d amalungu e-Auto Co., Ltd.
I-Cylinder Liner yinxalenye ye-cylindrical, ibekwe kumngxunya womzimba womzimba, kwaye ilungiswe yintloko yesilinda. I-piston yenza ukuba ivuselele intshukumo yayo yangaphakathi kunye namanzi okupholisa anikezelwa ngaphandle. Umsebenzi we-Liner Liner zezi:1. Indawo yokusebenza ye-cylinde yenziwa kunye nentloko yesilinda kunye nepiston.2. I-cylinder liner ye-cylindrical piston dissel i-injini ye-piston icala le-piston kwaye iba sisikhokelo sentshukumo yokufumana ipiston.3. Dlulisa ubushushu beNdibano ye-Piston kwaye ngokwayo kumanzi apholileyo ukuze usebenze kubushushu obufanelekileyo.4. I-Cylinder Sleve ye-injini yedizili ezimbini ilungiselelwe i-port ye-air, evuliwe kwaye ivaliwe yipiston ukufezekisa ukusasazwa komoya.I-1D yenxalenye ye-Auto., Ltd. Intro yokusetyenziswa kwe-panty lirs 1d amalungu e-Auto Co., Ltd.
Eyona i-4D33 ye-piston mitston mitston
I-Alfin Fisso i-Mitsdo Mitsdo i-4D33 ii-Injini ze-Injini yeDiston 108mm for mi013312 me016896Silandela uMgaqo-nkqubo we-1D: Imveliso esemgangathweni, umthengi kuqala. Iimveliso zethu zikwiTekhnoloji yaseJapan kunye ne-Taiwan.I-4D33 yenye yezonamodeli zixhaphakileyo. Kwaye umgangatho weemveliso zethu zichazwa ngabathengi abaninzi. Asingenzi fit ilungileyo, kodwa sinikezela ngqo le nto uyifunayo.Wamkelekile ukunxibelelana nathi kwaye uqalise intsebenziswano yethu yokuqala.I-1D yenxalenye ye-Auto., Ltd. Eyona i-4D33 ye-piston mitston mitston
Abenzi beenjini ye-injini
Ivalve ye-injiniI-1D yenxalenye ye-Auto., Ltd. Abenzi beenjini ye-injini
Ukuba awukwazi ukufumana iimveliso zeshelufu ezilungele le projekthi, i-ASH ye-ASH ye-ASH yeyokunceda ekufumaneni iimveliso zakho ezifanelekileyo kwiintsuku ezisi-7 ngaphandle kokuncama ixesha lentengiso okanye kwintengiso yentengiso. Ukuchaneka kwemveliso: Ukusetyenziswa kwe-Fortionation yeTekhnoloji ye-ART ukuyila kwaye kwenze iimveliso ziqinisekisa abathengi bafumana ezona mveliso zichanekileyo zifumaneka kakhulu.
1. Umbuzo: Abathengi baxelele ifom enqwenelekayo, imigaqo-nkqubo yokusebenza, umjikelo wobomi, kunye neemfuno zokuthotyelwa.
2. Uyilo: Iqela loyilo libandakanyeka ekuqalekeni kweprojekthi yokuqinisekisa ezona mveliso zilungileyo zilungele iimfuno zabaxumi.
Imveliso idlala indima ebalulekileyo kuluhlu olubanzi lwezicelo kwishishini.
Ukulahla ngokukhawuleza, ubomi obude buya kwi-120,000 yeekhilomitha
I-gasket epheleleyo.Ukunganyangeki kwe-corosion enamandla, uxinzelelo, ubushushu kunye nokunganyangekiI-1D yenxalenye ye-Auto., Ltd. Eyona mgangatho mhle ye-payiket
Nayiphi na imibuzo, i-Pls ibhale kuthi